Nhau - Zvakanakira emvura jecha nenyunje muchina
Nezvinodiwa zvemaindasitiri nharaunda, vatengi uye vatengi sarudza mvura jecha nenyunje muchina panzvimbo pakaoma jecha nenyunje muchina mvura jecha nenyunje muchina zvinowanzodavirwa kushandiswa: Aerospace, zvemagetsi, simbi, simbi, chakuvhuvhu, kemikari michini uye zvichingodaro. kushandiswa kugadzira mvura jecha nenyunje muchina. Liquid jecha nenyunje muchina iri mvura jecha nenyunje muchina. Liquid jecha nenyunje muchina rakasiyana yakaoma jecha nenyunje muchina, ndiye mvura jecha nenyunje muchina ndiko jecha (hasha) akaisa mumvura, mvura uye jecha musanganiswa, uye ipapo kushandisa vachikuya pombi uye compressed mhepo, kuburikidza pfuti mukuru-nokukurumidza jet inogadziriswa pane yekushandira, kuti uwane chinangwa chekuchenesa kwepamusoro uye kupedzisa zvikamu. Dry jecha nenyunje muchina haazosanganisi jecha nemvura uye kushandisa vachikuya Urume pombi izvi. Liquid jecha nenyunje muchina iri mvura jecha nenyunje muchina. Liquid jecha nenyunje muchina rakasiyana yakaoma jecha nenyunje muchina, ndiye mvura jecha nenyunje muchina ndiko jecha (hasha) akaisa mumvura, mvura uye jecha musanganiswa, uye ipapo kushandisa vachikuya pombi uye compressed mhepo, kuburikidza pfuti mukuru-nokukurumidza jet inogadziriswa pane yekushandira, kuti uwane chinangwa chekuchenesa kwepamusoro uye kupedzisa zvikamu. Dry jecha nenyunje muchina haazosanganisi jecha nemvura uye kushandisa vachikuya Urume pombi izvi.
Mvura jecha sandblasting muchina iri nani pane yakaoma sandblasting muchina nekuda kwayo kwakanyanya kushanda uye kushoma kwehasha kudyiwa. Inogona kuvandudza pamusoro pekupedzisa uye simba reiyo workpiece, uye zvinonyanya kuchinja dambudziko rekusvibiswa kwezvakatipoteredza. Kuisirwa kwemidziyo zvakare kuri nyore, uye haidi musangano wakasiyana. Inogona kugadziriswa zvakananga pamutsetse wekugadzira.
Chikumbiro chiyero chemvura sandblasting muchina
Liquid sandblasting muchina iriwo zvinowanzoshandiswa maindasitiri, akadai Aerospace, zvemagetsi, simbi, Hardware, chakuvhuvhu, makemikari michini, nezvimwewo, izvo zvinogona kupatsanurwa pamwe mvura sandblasting muchina, uye kuyerera kupinda sikuruwa conveyor nechepasi, iyo inotumirwa kupinda erevheta kuburikidza sikuruwa conveyor, uye vakasimudza kuti separator kubudikidza erevheta kuti kuparadzana. Guruva rine gasi rinoswededzwa muguruva muteresi neiyo fan. Mushure mekusefa, inova yakachena mweya uye inoburitswa mudenga. Iyo guruva inowira mubhokisi rekuunganidza guruva pazasi peguruva muteresi nemhepo kumashure ichivhuvhuta, uye mushandisi anogona kuibvisa nguva dzose. Iyo jecha remarara rinoyerera richibva mupombi yetsvina uye rinogona kushandiswazve nevashandisi. Musanganiswa wejecha repfuti unoshandiswazve mukamuri nepombi yekudzokorodza, uye wozoshandiswazve mushure mekuparadzaniswa neparadzanisa. Kurongeka kwepfuti kuputika mudziyo kunoitwa nekomberi-mativi emakomputa, uye ese maangles nenzvimbo dzegadziriro zvinotariswa nekombuta dhizaini. Pahwaro hwekutarisira ese emabasa ekushambidzira anoda kucheneswa, kukanda kusina chinhu kwema projectiles kunofanira kudzikiswa zvakanyanya sezvinobvira, kuitira kusimudzira mashandisirwo emagetsi uye kudzora kupfeka kweplate dzekudzivirira mukamuri yekuchenesa.